Ndị Filipaị 2: 5-11 Interlinear - IntegritySyndicate.com
Mbido Mgbakwunye Ndị Filipaị 2: 5-11
Kedu ihe Grik na -ekwu?
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ nsụgharị Bekee ama ama nke dị mma karịa ndị ọzọ, a na-asụgharị ha niile na nhụsianya iji gosi incarnation. N'okpuru ebe a bụ ihe odide Grik maka Fil 2:5-11 nke tebụl interlinear sochiri ya. A na-enyezie ntụgharị asụsụ nkịtị na ntụgharị okwu si na tebụl interlinear zuru ezu.
Ndị Filipaị 2: 5-11 (NA28)
5 A na -atụ anya mmụba dị elu na mmamịrị,
6 Nke a bụ ihe dị mkpa na -eme ka ọ pụta ìhè.
7 ʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καὶ · καὶ σχήματι σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἄνθρωπος
8 Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
9 A na -atụ aro ka ị jiri nwayọ kesaa ngwaahịa ahụ,
10 Nke a pụtara na ị ga -enwe ohere ị nweta ihe ịga nke ọma
11 Nke a pụtara na ị ga -enwe ohere ị nweta ihe ịga nke ọma.
houtos - Nke a, nke a, ndia; (dị ka ihe) ya, ya, ya, ha; na διά ma ọ bụ εἰς ọ pụtara maka nke a
Ngwaa, dị ugbu a, na-arụ ọrụ, dị mkpa, onye nke abụọ, ọtụtụ
phrọneọ - iche echiche, nkwanye ùgwù, jide echiche; itokwasi uche n'obi; inwe àgwà (ụfọdụ).
Nkọwapụta nke na -achị obodo ahụ
en – Spatially: n'ime, n'ime, na, n'etiti, na; ezi uche: site na, na, n'ihi; oge: n'oge, mgbe
hymin - gị, gị
usu - onye, ​​nke, gịnị, na; onye ọ bụla, onye, ​​otu onye
nri - na; na mgbe ahụ, mgbe ahụ; mana, n'agbanyeghị, agbanyeghị; kwa, ọbụna, n'otu aka ahụ
en -Spatially: n'ime, n'ime, na, n'etiti, na; ezi uche: site na, na, n'ihi
na e tere mmanụ
Aha, Dative, Nwoke, Otu
na Jizọs bụ Kraịst – Kraịst, Onye E Tere Mmanụ, Mesaịa, nsụgharị Grik nke Mesaịa Hibru
Aha, Dative, Nwoke, Singula
Azịza - Jesus
Nkpọaha, Nominative, Nwoke, Otu
usu - onye, ​​nke, ihe, ihe; onye ọ bụla, otu, otu
Aha, Dative, Nwanyị, Otu
morphe - ụdị, ọdịdị elu, ọdịdị
theos - Chineke, na-ezokarị aka na otu ezi Chineke ahụ; n'okwu ole na ole ọ na-ezo aka na chi ma ọ bụ chi nwanyị
Ngwaa, dị ugbu a, Na-arụsi ọrụ ike, Onye so na ya, Nhọpụta, Nwoke, Otu
hyparcho - Ị nọ n'ezie, ịdị adị, ịnọ ugbu a, nọrọ n'aka ya, ịnọ n'ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ, inwe ihe onwunwe.
ou - mba, ọ bụghị, ọ bụghị ma ọlị, n'ụzọ ọ bụla, kpamkpam ọ bụghị
harpagmos – A na-eme ihe ike ijide ihe onwunwe, ohi; ihe mmadụ nwere ike ịzọrọ ma ọ bụ kwupụta aha ya site na ijide ma ọ bụ ijide, ihe na-ekwu
o chiri onwe ya
Ngwaa, Aorist, Etiti, Ngosipụta, Onye nke atọ, dị n'otu
hegeoma - Ị nọ n'ọrụ nlekọta, ndu, ndu; itinye aka na usoro ọgụgụ isi, chee echiche, tụlee, nkwanye ùgwù
ho - Nke a, onye, ​​onye
eyai - ịdị, ịdị adị, ịdị adị
isos – nhata, otu; na nkwekọrịta
7 kama ya
Mkpọaha, ebubo, nwoke, otu, onye nke atọ
a – ma, kama, ma, ma e wezụga
heautou - onwe ya, onwe ya, onwe ya
ọ tụfuru efu
Ngwaa, Aorist, nọ n'ọrụ, na -egosi, Onye nke atọ, dị n'otu
kenọ - tọgbọrọ chakoo, napụ; (agafe) ka ọ bụrụ oghere, tọgbọrọ chakoo, enweghị uru ọ bụla
morphe -ụdị, ọdịdị elu, ọdịdị
doulos - ịgba ohu, ohu, na-achịkwa kpamkpam, dị ka fig. ndọtị nke usoro ịgba ohu
Ngwaa, Aorist, Onye na-arụ ọrụ, Nke so na ya, Nhọpụta, Nwoke, Otu
nọmba -ịnara, nata; (gafere) ka a nabata, họrọ
Aha, Dative, Neuter, Otu
homoioma - ụdị; myirịta, ihe oyiyi; oyiyi
nke ụmụ nwoke
Noun, Genitive, Nwoke, Ọtụtụ
anthrōpos - mmadụ, mmadụ; mmadụ, ndị mmadụ; nwoke, di
e mere ka ọ bụrụ
Ngwaa, Aorist, Middle, nsonye, ​​Nhọpụta, Nwoke, Otu
ginomai -eme ka ịbụ (“gen”-erate), ntụgharị (ntụgharị uche) na-aghọ (bịa n'ime), eji ya na nnukwu latitude (okwu nkịtị, ihe atụ, kpụ ọkụ n'ọnụ, wdg): - bilie, gbakọta, be(-bịa). , -ọdịda, -nwe onwe), a ga-eweta (na-agafe), (bụ) bịa (mere)
nri - na; (njikọ na ịga n'ihu) na mgbe ahụ, mgbe ahụ; (dị ka ihe mgbagwoju anya)
schema - steeti ma ọ bụ ụdị ihe a na-ahụkarị; akụkụ ọrụ nke ihe
a chọtara ya
Ngwaa, Aorist, Passive, Partition, Nominative, Nwoke, Otu
heuriskō - (ime ihe) ịchọta, chọpụta, izute; (mid.) inweta; (agafe.) ka a chọta
hụ - dị ka, na, otú, banyere, mgbe; dị ka, dị ka
Aha, Nominative, Nwoke, Otu
anthrōpos - mmadụ, onye; ndị mmadụ, ndị mmadụ; nwoke, di; eji mmadụ eme ihe dị iche na anụmanụ ma ọ bụ chi
8 ihe ngosi
8 o wedara
tapeinō – (omume) iweda onwe (onwe), ala (onwe); (agafe) ka eweda ya ala, weda ala, na mkpa
ginomai -bụ, bụrụ, emee; ibia adi, amuru
Nkọwa okwu, Nhọpụta, Nwoke, Otu
hypkoos – nrubeisi
mechri -ruo mgbe, ruo n'ókè nke
nnabata – ọnwụ
de - ọbụna
stauros - osisi ma ọ bụ akwụkwọ ozi (dị ka edobere nke ọma), ntụgharị (kpọmkwem), mkpanaka ma ọ bụ obe (dị ka ngwa nke ntaramahụhụ ọnwụ)
9 ya mere
nyere - Ya mere, ya mere, n'ihi nke a
Autos - ya, ya, ya; na-ejikwa dị ka inten.p., onwe ya, onwe ya, onwe ya, onwe ha; otu ahụ
O weliri elu
hyperypsoō – ibuli elu n’ebe kacha elu
charizomai - inye onyinye dị ka ihu ọma, ya bụ, n'obiọma, mgbaghara ma ọ bụ nnapụta
Onye nnọchi anya, Dative, nwoke, dị n'otu, onye nke atọ
ike - ya, ya, ya; na-ejikwa dị ka inten.p., onwe ya, onwe ya, onwe ya, onwe ha; otu ahụ
onoma - aha; aha; aha ọma
hyper (acc.) n'elu, gafere, karịa; (Jn.) maka, n'aha, n'ihi; n'ọnọdụ
pas - ihe niile, ihe ọ bụla, ihe niile
onoma – aha; aha; aha ọma
hina – ihe nrịbama nke na-egosi ebumnobi ma ọ bụ nsonaazụ: ka ọ bụrụ, ka ọ mee, nke mere na, mgbe ahụ
ho onoma - aha; aha; aha ọma
pas - ihe niile (ihe, otu), dum; mgbe niile
Noun, Nominative, Neuter, Otu
gonny - ikpere
Ngwaa, Aorist, Na-arụsi ọrụ ike, Subjunctive, Onye nke atọ, Otu
kamputa --ehulata, kpọọ isiala (na ikpere)
Adjective, Genitive, Nwoke, Ọtụtụ
epouranios - eluigwe, eluigwe; elu igwe
nri - na
epigeios - Ịnọ n'ụwa, ụwa
nke n'okpuru ụwa
katachtonio - n'okpuru ala, subterranean; nke a nwere ike na-ezo aka na ndị nwụrụ anwụ dị ka otu ndị mmadụ
Adjective, Nhọpụta, nwanyị, otu
itịbe - ihe niile (ihe, otu), dum; mgbe niile
glossa - ire; asụsụ
Ngwaa, Aorist, Middle, Subjunctive, Onye nke atọ, Otu
exomologeō – (omume) ikwenye; (mid.) ikwupụta n'ihu ọha, kweta, otuto
hoti - na; n'ihi na, ebe ọ bụ na; maka
ndị agha – Onyenweanyi, nna ukwu. Nke a nwere ike ịbụ aha adreesị nye onye nọ n'ọkwá dị elu, Onyenwe anyị, sir
chọrọ - na, n'ebe, n'ime; maka. Spatially: ije n'ebe ma ọ bụ banye na mpaghara (na-agbatị na ihe mgbaru ọsọ); ezi uche: akara ebumnuche ma ọ bụ nsonaazụ
ike - ebube, ịma mma, nchapụta, site na isi ihe pụtara ìhè dị egwu; nsọpụrụ, otuto
ụkpụrụ – nna, nwoke ma ọ bụ nna ma ọ bụ nna; site na ndọtị: aha nsọpụrụ, onye ndu, archetype
N'okpuru ebe a bụ nsụgharị nkịtị nke Ndị Filipaị 2: 5-11 dabere na tebụl interlinear (Interlinear). Ọ dabara n'usoro okwu Grik. Egosikwara bụ ntụgharị asụsụ nkọwa ntakịrị. Nsụgharị ndị a, na -agbanwe agbanwe na ihe Grik pụtara, anaghị atụ aro ka ha banye n'ime mmadụ. Ọ kwesịkwara ịpụta na okwu nke ọ bụla n'ime amaokwu ahụ nwere ezi uche na -echebara amaokwu a echiche n'ozuzu ya.
Ndị Filipaị 2: 5-11 Nsụgharị nkịtị
5 Echiche a n'ime gị
nke dịkwa na onye e tere mmanụ, n'ime Jizọs,
6 onye n'ụdị Chineke ọ na -adigide,
ọ bụghị ijide,
ịbụ ndị ha na Chineke,
7 kama ọ tọgbọrọ n'efu,
ụdị servile ọ natara,
n'oyiyi madu ka emere ya ka ọ di,
achọtara ya dịka mmadụ.
8 O wedara onwe ya ala
ebe anyị ghọrọ ndị na -erube isi ruo ọnwụ
obuna n'elu obe.
9 N'ihi nka ka O buli -kwa -ra Chineke n'onwe -ya
ma nye ya ya
aha karịrị aha niile
10 na n'aha Jisos,
ikpere niile ga -ehulata,
nke eluigwe na nke ụwa na n'okpuru ụwa,
11 ire niile ga -ekwupụta
na Onyenwe anyị Jizọs tere mmanụ
maka otuto nke Chineke, nke Nna.
Ndị Filipaị 2: 5-11 Nsụgharị Nsụgharị
5 Echiche a nwere n'ime gị,
echiche na Mesaịa - n'ime Jizọs,
6 onye nwere ngosipụta nke Chineke,
ọ bụghị ego,
o kwuru n'onwe ya
ịbụ onye nnọchiteanya nke Chineke,
7 kama ọ naghị ele onwe ya anya,
okwu nwa odibo ọ nabatara,
n'oyiyi madu ka emere ya,
na ihe mejupụtara,
amatara ya dika mmadu.
ebe anyị na -erube isi ruo ọnwụ,
9 Ya mere, Chineke n'onwe ya buliri elu
ma nye ya ya,
ikike karịrị ikike niile,
10 Ọ bụ n'aha Jizọs,
nke eluigwe, na nke ụwa na nke ndị n'okpuru ụwa,
na Jizọs is Onye nwem, Mesaya
to itoro Nna Chukwu.